मोटरसाइकल दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारको मृत्यु « प्रशासन
मोटरसाइकल दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारको मृत्यु
कैलालीको टिकापुरबाट से२प ९६६९ नं. को मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका भट्ट चढेको मोटरसाइकल र भीमदत्तनगरबाट धनगढीतर्फ जाँदै गरेको से१ज ८६२ नं. को भ्यान आपसमा ठोक्किँदा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले बताए ।
ठक्कर दिने भ्यान र चालक इप्रका झलारीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । भट्ट उग्रतारा सशस्त्र प्रहरी गण टिकापुरमा सहायक हवल्दार पदमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ । रासस